Voahaja ireo fepetran'ny fahasalamana. Mahafinaritra ny mahita ny fiaraha-mientana sy ny firaisankinantsika manoloana izao ady amin'ny valan'aretina coronavirus izao. Tsy anavahana na fihaviana, na finoana, na firehana politika. Na olon-tsotra, na fikambanana, na orinasa, na fanjakana. Arovy ny tenanao, arovy ny hafa”, hoy ny ben’ny tanànan’Antananarivo omaly.
ORINASA MAROMARO NANAMPY NY POLISY
Tampim-bava miisa 2200, vary iray taonina, ary atody 7000, no nomen'ireo orinasa tsy miankina ny Polisim-pirenena omaly. Orinasa matanjaka toy ny FILATEX, COMDATA, orinasa AKANJO, ary ny AGRIFARM no niray feo nanao izany ho fanampiana ireo polisy miasa andro aman'alina ho fiarovana ny vahoaka amin'ny valan'aretina Covid-19 ankoatra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay efa sahanina isan'andro.